Shirka Maal-gashiga Puntland oo laga soo saaray war-murtiyeed. • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Shirka Maal-gashiga Puntland oo laga soo saaray war-murtiyeed.
Shirka Maal-gashiga Puntland oo sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday Magaalada Garoowe caasimada Puntland ayaa maanta lasoo gabagabeeyay, Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni waxa uu sheegay 436,000,000 million oo dollar ay ganacsatadu kaga qaybqaadan doonaan maalgelinta Puntland sanadaha soo socda.
Shirka ayaa laga soo saaray 7 qodob oo diirada laga saaray natiijada kasoo baxday shirka, Puntland waxay sheegatay in shirkado kala duwan ay ku dhawaaqeen in ay maalgashadaan Puntland kuwaas oo kala ah Hyundai, Toyoto, dhismayaasha xarunta badbaabadad bay’ada, dhismayaal guryo, marsoonyin kaluun iyo maalgashiyo kale oo la xiriira beeraha, macdanta, biyaha iyo Technologyda.
Shirka Maalgashiga Puntland waxaa looga dhawaaqay in 1-1-2020 lagu qaban doono magaalada Boosaaso carwo ganacsiyeed ay shirkaduhu kusoo bandhigayaan adeegyada ay hayaan, Puntland waxay sheegtay in ay sii socon doonaan shirka u dhaxeeya dawlada iyo ganacsatada.